Qur'aana Archives - Page 9 of 10 - Ibsaa Jireenyaa
December 8, 2019 Sammubani Leave a comment
Suuratu Al-Mursalaat suurah waa’ee Guyyaa Qiyaamaa fi haala namootaa dubbattuudha. Dhugumatti, Suurah tana keessa ragaalee amansiisoo Qiyaamaan haqa ta’uu agarsiisanii fi wanta Guyyaa san raawwatamantu jira. Kanaafu, eenyutu ragaalee kanniinitti xinxalluun amanee Guyyaa san adabbii ibsame jalaa nagaha bahaa? Kutaa darbe irraa itti haa fufnu…
December 5, 2019 Sammubani Leave a comment
Bismillah rahmaani rahiim (Maqaa Rabbii rahmaan, rahiim ta’een jalqaba) Dhugumatti Faaruun hundi kan Rabbiiti. Isa ni faarsina, ni gargaarsifanna, araarama Isa kadhanna. Sharriwwan nafsee teenyaa fi hamtuwwan hojiiwwan keenyaa irraa Rabbiin eeggamna. Nama Rabbiin qajeelche kan isa jallisu hin jiru. Nama Rabbiin jallise kan isa qajeelchu hin jiru. Rabbii Tokkicha shariika hin qabne malee dhugaan gabbaramaan akka hin jirre ragaa nan baha. Akkasumas, Muhammad gabrichaa fi Ergamaa Isaa ta’uu ragaa nan baha.
Mormii Mushrikootaa-Kutaa 3
September 27, 2019 Sammubani Leave a comment
Mormii 3ffaa- Nabiyummaa Ergamaa Rabbii (SAW) faallessuu
Mushrikoonni namummaa Nabiyyii irratti mormii cimaa agarsiisan. Ergamaan Rabbii akka isaanii nama ooso hin ta’in malaayka ta’uu qaba ykn malaykan isa waliin kan deemu ta’uu qaba jedhanii yaadu. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
Mormii Mushrikootaa-Kutaa 4
Qur’aana ilaalchisee Mormii Mushrikoota-kutaa 2ffaa
Ammas Mushrikoonni kijiba biraa Nabiyyitti (SAW) maxxansan. Kijibni kunis, “Qur’aana kana Muhammadtu ofirraa fuudhe dubbate. Yookiin namoota durii irraa waraabe.” Kiristaanonni ammaas kijiba kana keessatti yommuu akkana jedhan isaan waliin hirmaatu: “Muhammad Qur’aana macaafa qulqulluu irraa garagalche.” Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa akkana jechuun Mushrikootaa, Kiristaanota fi garee biraatiif deebii deebisa:
September 8, 2018 Sammubani Leave a comment
Gammachuu fi Milkaa’inna argachuu
Jireenya tana keessatti namoonni hunduu gammachuu argachuuf jecha halkanii guyyaa carraaqu. Gariin hojii humna hojjachuun, gariin hojii sammuu hojjachuun gammachuu barbaadu. Garuu gammachuun ilma namaa kan guuttamu wantoota sadii of keessaa yoo qabaatedha. Isaaniis: qalbiin amanuu, qaaman hojii gaggaarii hojjachuu fi hojii badaa irraa of tiiksudha. Namni tokko wantoota kanniin hojjachuuf qajeelcha isa barbaachisaa miti ree? Qajeelchi waa’ee wantoota kanniinii isaanitti himu kitaabban Rabbiin irraa bu’aniidha. Kanaafu, firiiwwan kitaabbanitti amanuu keessaa tokko wantoota armaan olii sadanitti qajeelun gammachuu fi milkaa’inna argachuudhaa jechuudha.
Kutaalee darban keessatti waa’ee Qur’aanaa ilaalchise shakkii qalbii namaa keessatti uumamaniif karaalee ittiin qulqulleessan ilaalle turre. Har’as itti fufuun shakkii namoonni qalbii namaatti darban deebii quubsaa waliin ilaalla. Seenaa keessatti Qur’aanni jireenya namootaa irrati jijjirrama guddaa akka hin finneef adduwwiin (diinni) Islaamaa tooftaalee adda addaatti fayyadamanii jiru. Tooftaalee sanniin keessaa sababa fi gaafilee adda addaa dhiyeessun namoota dhamaasudha. Sababa ykn gaafilee isaanii keessaa isaan gurguddoo ta’an deebii waliin mee haa ilaallu. Read more
Wantoonni Qur’aana keessatti dubbataman haala nama ajaa’ibsiisuun saayinsii ammayyaati fi muxannoo namaa waliin kan wal simatanii fi walitti galaniidha. Saayintistoonni yeroo ammaa wanta Qur’aana keessa jiru yommuu argan, Qur’aanni kitaaba Rabbiin irraa bu’e malee kitaaba namni barreesse akka hin taane mirkaneessanii jiru. Mee amma Qur’aana irraa Aayaata (keeyyattoota) muraasa saayinsi ammayyaatin wal qabatan haa ilaallu. Read more
Qur’aanni kalaama (haasawa) Rabbal aalaminaa akka ta’ee fi qulqullummaan isaa hanga ammaatti akka tiikfame yeroo darbee ilaalle jira. Namoonni namoota daandii haqaa irraa jallisuuf halkanii guyyaa carraaqan, Qur’aana jijjiruu akka hin dandeenye yommuu beekan, namootatti shakkii naquu hojii ofii godhatan. Namoota qofa osoo hin ta’in sheyxaanni keessaas shakkii namatti naquuf halkanii guyyaa namatti hasaasa. Kanaafu, Qur’aanni jecha ykn haasawa Rabbii ta’uu isaa akkamitti beeknaa? Karaa baay’een beekna. Mee isaan keessa muraasa isaanii haala armaan gaditiin haa guduunfinu. Read more